ဂိတ်အဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ဂိတ်အဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ဂိတ်အဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8002 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2~4အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
ဂဟေဆော်သည့်ဂိတ်တံခါးအဆို့ရှင်များသည် Solder Ends ဖြင့်ဖြစ်သည်
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Art.8003 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ အရွယ်အစား: 9mm မှ 13mm, 19mm, 25mm မှ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box:...
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Art.8004 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ အရွယ်အစား: 13mm မှ 110mm မှ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8005 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2~4အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် KS-3040 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် M / M အရွယ်အစား: 1,25MM အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။0ဒီဂရီကနေ 180 ဒီဂရီမှ 6....
အနီရောင် chrysanthemum ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8007 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2~2အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
Big Flow ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8008 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F လေအေးပေးစက်နှင့်အတူ ရော်ဘာဂိတ် အရွယ်အစား - ၁၃mm မှ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8009 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား - ၁၃ မီလီမီတာ၊ ၁၉ မီလီမီတာ၊ ၂၅ မီလီမီတာ၊ ၃၂ မီလီမီတာ၊ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
တောင်ပိုင်း USA ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8011 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2, 3/4, 1 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။0ဒီဂရီကနေ 180...
Supply နိုင်ခြင်း: 1000000 PER MONTH
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၂၅၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar, Nax.working ဖိအား 25bar ။ 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT...
Solder Ends နှင့်အတူမက္ကဆီကိုကြေးဝါဂိတ်တံခါးအဆို့ရှင်
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Art.8013 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။...
စျေး Pfister အကြီးစားကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8014 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
PN20 ယူအက်စ်အေဂိတ်အဆို့ရှင် 13mm
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8015 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 ~4အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ယူနိုက်တက်စတိတ် Gate သည် Solder Ends နှင့်အတူဖြစ်သည်
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Art.8017 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1,13mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည်...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8018 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 /4~2အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8019 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 4,3 / 8,1 / 2,3 / 4,1 ~4အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8020 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1,11 / 4,11 / 2,2,21 / 2,3,4 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ကြေးဝါဝက်အူ Nut dual- မှတဆင့်ဂိတ် Valves KS-3230 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 13MM ~ 103MM မှစ။ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8021 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 13mm မှ ~ 103mm မှ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။...
ဖြောင့် - မှတဆင့်ကြေးဝါ Thread Gate ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8023 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 ~4အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။0ဒီဂရီကနေ...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8024 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ ၂.၃ / ၄ ~ ၂ " အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
ဖြောင့် - မှတဆင့်သောကြေးဝါတံခါးတံခါး
ဖြောင့် - မှတဆင့်သောကြေးဝါတံခါးတံခါး Art.8025 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 ~4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ဂိတ်အဆို့ရှင် အတုအဆို့ရှင် မီးသတ်အဆို့ရှင် ဂိတ်သုတ်အဆို့ရှင် Tee အထီးအဆို့ရှင် ကြေးဝါအဆို့ရှင် ပလပ်စတစ်အဆို့ရှင် filter ကိုအတူအဆို့ရှင်